Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Manchester United oo u jawaab celiyay Louis van Gaal – Gool FM
Mid ka mid ah halyeeyada kooxda Manchester United oo u jawaab celiyay Louis van Gaal
(England) 29 Maarso 2019. Laacibkii hore kooxda Manchester United iyo kubadda cagta dalka England ee Gary Neville ayaa ka jawaab celiyay wareysi uu dhawaan kaga hadlay Louis van Gaal kubadda cagta uu soo bandhigo macalinka haatan leeliyay United-ka ee Ole Gunnar Solskjær.
Louis van Gaal ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay in kubadda cagta ay ciyaarto haatan kooxda Manchester United uu hogaaminayo tababare Solskjær aysan waxba ka duwaneyn tii Jose Mourinho.
Balse halyeeyga kooxda Man United ee Gary Neville oo arintan ka hadlayay ayaa wuxuu jawaab cad siiyay macalinkii hore ee Red Devils-ka ee Louis van Gaal, wuxuuna muujiyay in marka isaga loo fiiriyo uu ka fiicnaa macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in kubadda cagta uu bixiyay Louis van Gaal intii uu hogaamiyaha kooxda Manchester United, ay ahayd midii ugu xumeyd ee aan abid arko”.
“Kubadda cagta ay ciyaartay kooxda Manchester United inta uu ku sugnaa Jose Mourinho ayaa in badan ka ficneyd kubadda van Gaal, inkastoo aysan ahayn wax la aqbali karo, maadaama aysan noqonin sida ay doonayeen jamaahiirta inay arkaan”.
Waxaa xusid mudan in Shalay ay maamulka kooxda Manchester United si rasmi ah ugu magacaabeen tababare Ole Gunnar Solskjær macalinka sida tooska ah u maamuli doono Red Devils.
Xiddigaha Kooxda Tottenham oo tababarkoodii ugu horreeyey ku qaatay garoonkooda cusub… + SAWIRRO
Cristiano Ronaldo oo u duulay Magaalada Barcelona… (Muxuu yahay u jeedka safarkiisa?)